LEECO – Tagged "Home Office Furniture" – ICT.com.mm
LEECO Locker LK-306K342,000
LEECO Locker LK-204K275,000
LEECO Locker LK-118K674,000
LEECO Locker LK-112K620,600
LEECO Cupboard WD-02 (Knock-Down)K348,000
LEECO Locker LK-306
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: LK-306 Size: 914(W) x 457(D) x 1830(H) mm (WxDxH)
LEECO Locker LK-204
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: LK-204 Size: 382 x 470 x 1830 mm. (WxDxH)
LEECO Locker LK-118
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: LK-118 Size: 914 x 457 x 1830 mm. (WxDxH)
LEECO Locker LK-112
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: LK-112 Size: 914 x 457 x 1830 mm. (WxDxH)
LEECO Cupboard WD-02 (Knock-Down)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WD-02 Size: 914 x 515 x 1817 mm. (WxDxH)
LEECO Sliding Cabinet SLG-305
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: SLG-305 Size: 1489 x 407 x 880 mm. (WxDxH)
LEECO Sliding Cabinet SLS-304
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: SLS-304 Size: 1185 x 407 x 880 mm. (WxDxH)
LEECO Sliding Cabinet SLG-304
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: SLG-304 Size: 1185 x 407 x 880 mm. (WxDxH)
LEECO Sliding Cabinet SLS-303
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: SLS-303 Size: 881 x 407 x 880 mm. (WxDxH)
LEECO Cabinet SLG-303
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: SLG-303 Size: 881 x 407 x 880 mm. (WxDxH)
LEECO Locker CT-515
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: CT-515 Size: 377 x 459 x 1319 mm. (WxDxH)
LEECO Locker CT-510
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: CT-510 Size: 377 x 459 x 940 mm. (WxDxH)
LEECO Locker FC-054
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 054 Size: 463 x 620 x 1324 mm. (WxDxH)
LEECO Locker LK-206
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: LEECO Item Name: Locker Model: LK-206 Size (W x D x H): 382 x 470 x 1830 mm Net Weight: 32 kg
LEECO Office Desk DK-2648
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: LEECO Item Name: Cupboard Model: DK-2648 Size (W x D x H): 1219 x 660 x 740 mm Net Weight: 41 kg
LEECO Cupboard SLS-603
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: LEECO Item Name: Cupboard Model: SLS-603 Size (W x D x H): 914 x 470 x 1817 mm Net Weight: 51 kg
LEECO Cupboard SLG-603
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: LEECO Item Name: Cupboard Model: SLG-603 Size (W x D x H): 914 x 470 x 1817 mm Weight: 56kg
LEECO Desk Chair E-421
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: LEECO Item Name: Desk Chair Model: E-421 Materials: Fabric Foam Seat and Back Size: 590 x 530 x 995 mm LEECO ကထုပ်လုပ်သည့်ဆုံလည်ခုံများဟာ ခါးဆစ်ရိုးနှင့်ကျောရိုးမတလျောက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် ခါးနာခြင်းနှင့်...
LEECO Desk Chair LSC-411
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: LEECO Item Name: Desk Chair Model: LSC-411 Materials: Fabric Foam Seat and Back Size: 590 x 530 x 910 mm LEECO ကထုပ်လုပ်သည့်ဆုံလည်ခုံများဟာ ခါးဆစ်ရိုးနှင့်ကျောရိုးမတလျောက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် ခါးနာခြင်းနှင့်...
LEECO Desk Chair LSC-421
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: LEECO Item Name: Desk Chair Model: LSC-421 Materials: Thick Padded Contoured Premium quality Fabric seat & back with lumbar Support Premium Nylon Leg with wheels Mechanism...